သုံးတံခါးကိုခနျးအသုံးအများဆုံးဖြစ်ကြောင်း။ ဤအမော်ဒယ်များဧရိယာ, စွမ်းရည်နှင့်လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌အကောင်းဆုံးကြောင့်ဒီအံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဇိုင်းအားဖြင့်သူတို့ကအနုပညာကို၏အကျင့်တို့သည်ပုံစံမျိုးစုံနှင့်အပြင်ပန်းဒီဇိုင်းထုတ်ကုန်နှင့်အတူအိပ်မက်မက်ဖို့ပင်ပန်းရပါဘူးသူကိုထုတ်လုပ်သူမှကျေးဇူးတင်စကားနှင့်ဆင်တူလိမ့်မည်။
ကက်ဘိနက်၏ရှုထောင့်နှစ်ခု-တံခါးကိုမော်ဒယ်များထက်သိသိသာသာပိုရှိသည်ကတည်းကကြောင့်ချက်ချင်းအရွယ်အစားနှင့်တပ်ဆင်တည်နေရာကိုဆုံးဖြတ်ရန်လိုအပ်သည်။ အများဆုံးကိစ္စများတွင်အမြင့် 150 240 မှစင်တီမီတာကနေအထိသုံးတံခါးကိုဝန်ကြီးအဖွဲ့ရဲ့ width ၏အရွယ်အစား - 220-240 စင်တီမီတာနှင့် 60 သို့မဟုတ် 45 စင်တီမီတာအနက်။
အကြောင်းအရာအဖြစ်ပြုလုပ်ပေါင်းစပ်နှင့်စင်ပေါ်, အံဆွဲ, ဆွဲထားအဝတ်အဘို့အချောင်းတွေ, ဖိနပ်များနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများအတွက်ဌာနပါဝင်သည်ရပါမည်။ ဒါဟာသုံးတံခါးကိုဗီရိုကဖြည့်စွက်သောကွောငျ့, သင်တစ်ဦးချင်းအပေါ်အခြေခံညှိနှိုင်းရန်နိုငျသညျ, ပင်အိပ်ခန်းထဲတွင်ပင်စင်္ကြံထဲမှာသင့်လျော်သည်။
သုံးတံခါးကိုဗီရို၏ပြင်ပဒီဇိုင်းကိုအလိုအရမကြာခဏဆိုသလိုတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ် မှန် သို့မဟုတ်ဖန်, sandblasted ပုံစံ, ဒါမှမဟုတ်ဖန်ခွက်နှင့်သစ်သားနှစ်ဦးစလုံးအပါအဝင်စုစုပေါင်းတံခါးများနှင့်အတူအလှဆင်။ ဒါ့အပြင်ခေတ်သစ်ဗီရိုတံခါးအဖြစ် Frost ဖန်နှင့်အတူဖန်ဆင်းတော်မူ၏။
သုံးတံခါးကိုဗီရို၏အရောင်အရောင်ဘဝအလင်းနှင့်မှောင်မိုက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် Weng ရောင်စုံ။ သားသမီးရဲ့အခနျးမြားအဘို့အမကြာခဏဓါတ်ပုံကိုပုံနှိပ်ခြင်းနှင့်အတူရရှိနိုင်ပါသည်သုံးတံခါးကိုခနျးမြားမှာ - တစ်ဦးတောက်ပနှင့်ရောင်စုံ, မည်သည့် multpersonazhami ရုံလှပသောရုပ်ပုံများနှင့်အတူ။
ဖြောင့်သို့မဟုတ် angular - ဒီဇိုင်းသည်သုံးတံခါးကိုဗီရိုနှစ်ခုအမျိုးအစားများရှိနိုင်ပါသည်။ အဖြစ် built-in သို့မဟုတ် freestanding ။ အဆိုပါရွေးချယ်မှုကိုအခန်းနှင့်၎င်း၏အရွယ်အစား၏ဂျီသြမေတြီအပေါ်မှာပဲမူတည်ပါလိမ့်မယ်။ ခြော, Built-in ပုံးနှစ်ဦးစလုံးသိမ်းပိုက်ထားသောအာကာသ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အများဆုံး Ergonomics နှင့်ချွေတာဖြစ်ကြောင်းနှင့်၎င်း၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများကိုတည်ဆဲနံရံများနှင့်မျက်နှာကျက်နဲ့အစားထိုးပါလိမ့်မည်အဖြစ်, ပိုက်ဆံကုန်ကျသည်။
Feng Shui ပေါ်တွင်အိပ်ရာထားရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
ကျောက်အောက်မှာ Plinth panel က
Potis & Verso - နွေဦး-နွေရာသီ 2014
Theme ပါတီများ - စိတ်ကူးများ
Fljukostat thrush ယူနည်း
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းအမျိုးသမီးတစ်ဦး play လိမ့်မည်နည်း Bookmakers ဂေလီယန် Anderson တို့အပေါ်ကစားနည်းယူပါ!
Kirsten Dunst နှင့် Jake Gyllenhaal
Numerology အတွက်နံပါတ် 7
Azalea ဥယျာဉ်တော် - rhododendron ၏စောင့်ရှောက်မှုနှင့်စိုက်ပျိုးသူအပေါင်းတို့ကိုအသေးစိတျ
ပြတင်းပေါက်၏ဒီဇိုင်း - ကုလားကာ